Iwe unogadzira sei bubble yemari? | Ehupfumi Zvemari
Kwemwedzi yakati wandei, mazwi mazhinji uye ane mvumo anga achiyambira nezve kuputika kwebhodhoro rezvemari. Aya mamiriro asingadiwe pachikamu cheavo vakasiyana vezvemari, kunyangwe chiri chokwadi kuti iri izwi risingazivikanwe nechikamu chikuru cheveruzhinji. Nekukomba kwemhedzisiro inogona kuunzwa nemamiriro ezvinhu anotyisa aya vanotyiwa zvikuru navose. Hazvishamise kuti icho chinhu chinogona kukanganisa zvakanyanya kukosha zvehupfumi. Kubva pakusikwa kwemabasa kusvika mukukura kwehupfumi hwenyika.
Usati watanga kutarisa mhedzisiro yebudiriro yemari, hapana zvirinani kuongorora kukosha kwayo chaiko. Zvakanaka, iyi mamiriro ezvehupfumi anonyanya kuita mashandiro kwete zvataurwa izvo zvinogadzirwa mumisika yemari, zvikuru nekuda kwe maitiro akabatanidzwa nekufungidzira. Inogona kutorwa nezvikonzero zvakasiyana uye nemhando dzakasiyana, senge zvivakwa, musika wemasheya kana chero imwe mhando. Iko hakuna zvirambidzo zvine chekuita nekwakabva izvi zvehupfumi kana zvemari maitiro akakosha kukosha.
Chimwe chinhu chinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti uchinzwisise muhukuru hwayo hwese ndicho chinoreva mhedzisiro yaro pasosaiti iyo yakabatwa nekufamba kwakaomarara uku. Zvakanaka, hazvigone kukanganwika kuti imwe yenzira dzakajairika yekuti zviitike inogona kunge iri nekuda kwekukwira kusingaite uye kwenguva refu mumutengo wemamwe masheya kana kunyangwe zvivakwa. Kusvika padanho rekuti iro rinonyanya kuitika iko kuoneka kwechakakosha kukwira kweinonzi kufungidzira. Uye ndedzipi mhedzisiro yadzo nekukurumidza? Zvakanaka, zvinosuruvarisa chii chinokuvadza hupfumi mune zvese.
1 Bubble: mune ipi mari yemari?
2 Iyo yakawandisa kukosha inopfura kumusoro
3 Kupunzika mumitengo
4 Utachiona hwekushungurudzika kukuru
5 Real estate bubble kuSpain
6 Mhinduro dzekugadzirisa dambudziko
Bubble: mune ipi mari yemari?
Bhora rezvemari rinogona kubuda mune chero hupfumi hwemari, zvisinei hazvo zvingave zvisingawanzo. Mupfungwa iyi, hapana kirasi yekusiyiwa sekusimbiswa nechiitiko chemakore apfuura. Chero chadzo chinogona kuunza mimwe mibairo iyo inofanirwa kutarisirwa seyakaipa seyakaipa. Panogona kuve neyakaumbwa sebhopu mumisika yemari inotorwa kubva muchikwereti. Hazvishamise kuti ivo vanopinda nenzira imwechete mune ese zviitiko. Kusvika padanho rekusazivikanwa kwechikamu chakanaka chevaoni vehupfumi. Sechokwadi kuitsanangura nenzira kwayo uye ita kuti inzwisisike kune vese vashandisi.
Kubva pane ino yakawanda mamiriro, hapana mubvunzo kuti inotanga nenzira yakajeka isingarambiki. Izvi zvinoreva kuti, pane kupisa kusingawanzoitika mumitengo yavo izvo zvinovatungamira kuti vasvike mamwe matanho asina kukwana. Chero zvingave zvakakanganiswa mari, chivakwa, chikwereti cheveruzhinji kana chero simbi inokosha. Semhedzisiro yechiito ichi, varimi vanogona kuwana mari yakawanda mumabasa akavandudzwa. Asi vachatofanira kuvhara nzvimbo dzavo nekukasira nekuti vanogona kurasikirwa nechikamu chikuru cheguta ravo munguva pfupi.
Iyo yakawandisa kukosha inopfura kumusoro
Maitiro ekuti fomu yemari inowoneka zvakanyanya nekukwira kwemutengo weasset yemari. Nekuti kana kuita kwakasarudzika uku kuchionekwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti midziyo iri mubvunzo inokwira zvisingaenzaniswi uye zvisina kujairika kwenguva yakareba nekuda kwekuwedzera kwekutengesa izvo skiroketi kukosha kwayo. Kusvika vasvika pamatanho angangodaro vasina kana kumbosvika uye ayo anokwezva kutariswa kune vadiki nepakati varimi Hazvishamisi kuti isu tiri kutaura nezvekufamba mumisika yemari isina kujairika zvachose. Kana zvisiri, pane kudaro, zviri pachena zvakasarudzika sezvaungaona mune tsananguro yechinyorwa chino.
Kune rimwe divi, iyi mamiriro anogona kukubatsira iwe kutengesa gare gare uye nenzira iyi uwane zvakanakisa mari inowanikwa mukuita kunoitwa pane zviwanikwa zvemari zvinopfuura nemuchiitiko ichi. Nepo kune rimwe divi, iyo yekupedzisira mhedzisiro yakanyatsopesana. Ndokunge, kana mutengo wezvigadzirwa kana midziyo yanga yave chinhu chekufungidzira ivo vari kure nekukosha chaiko kwavanofanira kuve nako panguva iyoyo. Mhedzisiro inonyanya kuitika ndeyekuti mutengo unosvetuka nemhepo sezvavanotaura zvisina kunaka. Nokuwa kudonha kunogona kukanganisa kudyara kwevashandisi.
Mitengo inogona donhedza kusvika ku50% kana kunyangwe nekusimba zvakanyanya kana izvo zvakafanana ivo vanodonha nehukuru huturu. Mumafambiro asina kujairika mukusimudzira kwavo uye anogona kutosvika kuzero kukosha, sezvakaitika nguva pfupi yadarika neimwe nhumbi yemari. Iyi ndiyo imwe yenjodzi dzekumisikidzwa mukirasi ino yezvichengetedzo kana zviwanikwa zvemari. Nekuti iwe haugone kukanganwa kuti iwe unogona kurasikirwa ingangoita yese investa yakaitwa kusvika panguva ino.
Ndokusaka zvisingashamisi kuti mafambiro asina kujairika aya anonzi mutswe uye izvo zvinogona kugadzirwa kunyangwe mumisika yemari uye zvakanyanya kunyanya mumusika wemasheya. Kusvikira pakuti vanogona kuparadza hupfumi hwenyika sezvo vari mafambiro ane njodzi mune zvese zvehupfumi. Kubva pane ino maonero, haugone kukanganwa kuti mukusimudzira kwayo iwe unofanirwa kudzivirira kumira panzvimbo nekuti unogona kuzviona wakanyura mukukura kukuru kwekurasikirwa. Kupfuura zvaunogona kufungidzira kubva pakutanga.
Utachiona hwekushungurudzika kukuru
Kuongororwa kwenhoroondo hakuratidze kuti mafambiro aya anogona kuve mavambo ekushushikana kukuru muhupfumi hwenyika kana kunyangwe pasipasi. Kune mienzaniso yezvakaitika mu Kushungurudzika Kukuru kwema30 muUnited States uye diki risingazivikanwe rezvivakwa muJapan muma80. Iwo anoratidza zvakanyanya mhedzisiro yesangano iri rine njodzi pazvinhu zvemari. Zvakawanda kupfuura kudonha kwemutengo kubva kune yayo chaiye kana zvirinani kukosha kwakayerwa.
Nekuti mukuita, zvinogona kutungamira kuhupfumi hwenyika kudonha. Nekukura kushoma kwehupfumi, kushomeka kwemabasa uye nemutengo uri mutengo wemari pauriri. Muchidimbu, mune yakaipisisa mamiriro ezvinhu kana ikabata nheyo dzenyika. Mupfungwa iyi, mazuva ano vanhu vari kutaura nezve kubhowa muzvikwereti zveveruzhinji uye kuti chero nguva inogona kukanganisa tarisiro yevanotenga zvidiki nepakati. Mupfungwa iyi, chikamu chikuru chevanoongorora zvemari vanokurudzira vatengi vavo kuti vasavhenekerwa pamari yakamisikidzwa yehunhu uhu. Nekuti ivo vanogona kurasikirwa zvinopfuura kukunda.
Real estate bubble kuSpain
Chimwe chezviitiko zvepedyo ndizvo zvatiri kusangana nazvo kuSpain nemutengo wemba. Nekuti zvirizvo, zviri kukwirazve kumatanho asina kuoneka mumakore achangopfuura uye izvo zvinogona kuve chikonzero chekukanganisa uku mumitengo kuti zviitike. Mupfungwa, ivo varairidzi mukirasi ino yezvivakwa vari kuita mari zhinji mukuita kwavo. Asi zvirokwazvo ivo vanomhanyisa njodzi yakakomba iyo kurasikirwa neushingi semhedzisiro ye bubble yeaya maitiro. Kwete pasina, ndiyo nzira imwechete iyo yakaitika muSpain nekutanga kwedambudziko rehupfumi. Iko mutengo wemba wakadzikira kusvika pamatanho asingatarisirwe nevaridzi vatsva.
Vaongorori vemaindasitiri vari kutonyevera kuti izvi zvinogona kuitika. Chimwe chezviratidzo kusvika pamhedzisiro iyi kuwedzera kwakanyanya mumutengo we kukodzwa Mumwedzi yekupedzisira. Mumakona makuru yakasvika mitengo inorambidzwa chaizvo kwechikamu chakanaka chevangangoenzanise. Iyi inyevero yakakomba nezve izvo zviri kuitika nekudziya kwemutengo wekutengesa zvivakwa. Chikamu chakakosha chehupfumi hweSpanish uye kuti kana zvikaitika zvinogona kukanganisa hupfumi kuSpain.
Mhinduro dzekugadzirisa dambudziko
Mhedzisiro inotyisa yehupfumi kana yemari isati yasvika, hapazovi nesarudzo kunze kwekutora nhanho dzezviyero kudzikisa kuitika kwayo. Ehezve, kugadzirisa dambudziko, iyo European Central Bank iri muchinzvimbo cheku simudza chimbadzo kubhengi, uye, zvishoma nezvishoma, mitengo yezviito uye yepasi inoenda kune zvakajairwa. Sezvinodikanwa kune chikamu chikuru chevamiriri vehupfumi vanotora chikamu mune ino inoshamisa maitiro. Kune rimwe divi, iwe zvakare unofanirwa kufunga nezve zvese zvine chekuita nemutemo wekugovera uye wekuda.
Chero zvazvingaitika, tiri kutaura nezveimwe yeanotyisa mamiriro ehupfumi hwenyika dzese uye kuti hurumende dzinoedza kuzvidzivirira pazvinhu zvese. Nekuti mhedzisiro yayo inouraya kune zvido zvevose. Kunyangwe kune rimwe divi, hazvisi zvakajairika kuti matambudziko aya abude neakawandisa. Kana zvisiri, pane kudaro, iwo inguva pfupi kwenguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Iwe unogadzira sei bubble yemari?